Medallia: fitantanana traikefa ahafahana mamantatra, mamantatra, maminavina ary manitsy ny olan'ny mpanjifanao | Martech Zone
Medallia: fitantanana traikefa ahafahana mamantatra, mamantatra, maminavina ary manitsy ireo olana amin'ny zavatra niainan'ny mpanjifanao
Alatsinainy, Septambra 14, 2020 Alatsinainy, Septambra 14, 2020 Douglas Karr
Ny mpanjifa sy ny mpiasa dia mamokatra fambara an-tapitrisany manakiana ny orinasanao: ny zavatra tsapan'izy ireo, ny zavatra tian'izy ireo, ny antony ananan'ity vokatra ity fa tsy izany, any amin'izay andaniany vola, inona no mety ho tsara kokoa… Na izay mety hahasambatra azy ireo, handany bebe kokoa, ary ho mahatoky kokoa.
Ireo signal ireo dia tototry ny fikambanananao ao amin'ny Live Time. Medaly misambotra ireo fambara rehetra ireo ary mahatakatra izany. Noho izany dia azonao atao ny mahatakatra ny traikefa rehetra amin'ny dia rehetra. Ny faharanitan-tsain'ny artifisialin'i Medallia dia mamakafaka ireo famantarana rehetra ireo hahitana lamina, hamantarana ny loza mety hitranga ary haminavina ny fihetsika. Azonao atao ny manamboatra olana alohan'ny hitrangany ary mampihena ny fotoana ahafahanao manao traikefa miavaka.
Inona no atao hoe Experience Managment?
Ny fitantanana traikefa dia ezaky ny fikambanana handrefesana sy hanatsarana ny traikefa omeny ny mpanjifa ary koa ny mpandray anjara toa ny mpivarotra, mpamatsy, mpiasa ary tompon-trosa.
Medalia Experience Cloud Features
Ny tolotra Medallia's Experience Cloud dia mahatratra 4.5 tapitrisa tapitrisa isam-bolana ny fambara isan-taona, 8 tapitrisa tapitrisa isan'andro ny isan'ny mpampiasa isam-bolana. Ny mari-pahaizana momba ny traikefa ho an'ny mpanjifa dia azo alaina amin'ireo fampitaovana sy fantsona manaraka rehetra:
resadresaka - SMS, fandefasan-kafatra
miteny - Fifandraisana amin'ny feo
Digital - Tranonkala, ao anaty fampiharana
na aiza na aiza - Fitaovana, IoT
Social - Fihainoana ara-tsosialy sy hevitra an-tserasera
fanadihadiana - Hevitra mivantana
LivingLens - Vondron-tsary sy fifantohana
Core ho an'ny tolotra Medallia dia Medaly Athena, izay manome hery ny sehatr'asa fitantanana traikefa ananany miaraka amin'ny faharanitan-tsaina forongoa mba hamantatra lamina, hiandrasana mialoha ny filàna, haminavina ny fitondran-tena ary hampifantoka ny saina amin'ny fanapahan-kevitry ny traikefa nohatsaraina.
Ny mampiavaka an'i Medallia Alchemy dia ahitana:
Medallia Alchemy dia mandefa rindranasa fitantanana traikefa manaitaitra sy mampiankin-doha amin'ny fahitana fomba fijery sy fandraisana andraikitra
Namboarina ho an'ny fitantanana traikefa - Ny rindranasa Medallia dia manararaotra ireo singa sy modules UI Medallia Alchemy, namboarina ho an'ny Experience Management, hanomezana traikefa tsy miovaova na intuitive manerana ny tranonkala sy ny finday.
Fanatsarana ny fanatsarana ny mpampiasa - Medallia Alchemy dia mitarika ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny traikefa manankarena izay misy ny sary mifandraika amin'ny fifandraisana, mifanaraka amin'ny andraikitra samihafa sy ny karazana mpampiasa.
Fondation Technology Modular - Mora sy haingana mandray ny fanavaozana Medallia farany ho an'ny mpampiasa anao, izay natao tamin'ny alàlan'ny maritrano maodelin'i Medallia Alchemy.
Hierarkian'ny fandaminana Medallia
Medallia mampifanaraka am-pilaminana ny fandaharam-potoanao traikefa mba hifanaraka amin'ny rafitry ny fandaminana tsy tapaka ary mandeha ho azy. Inona no dikan'ity? Data marina. Olona marina. Tsy misy hatak'andro.
Fifanarahana modely ho an'ny herinaratra sarotra - Modely amin'ny ambaratongam-pandaminana sarotra rehetra ary zahao ny fomba fahitana tsara ho an'ny mpiasa marina amin'ny fotoana mety hahafahan'izy ireo mandray ny hetsika mety.
Fahazoan-dàlana azo ovaina - Hajao ny fahazoan-dàlan'ny angon-drakitra tsara sy ny fifehezana ny fidirana amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny ambaratonga ambony mba hahazoana antoka fa fampahalalana sahaza sy azo ekena ihany no zaraina amin'ny mpampiasa tsirairay mifototra amin'ny andraikitra sy andraikitra.
Fifanarahana amin'ny fotoana tena izy - Ampidiro amin'ireo rafitra firaketana maro (CRM, ERP, HCM) mba hampifanaraka amin'ny fomba mavitrika ireo fanovana rehetra ao amin'ny ambaratongam-piangonana sy ny fifandraisana amin'ny fotoana tena izy.
Tombontsoa amin'ny fitantanana traikefa Medallia dia misy:
Analytics an-tsoratra - Fantaro ny antony ao ambadiky ny naoty: esory ny lohahevitra, ny fahatsapana ary ny mpamily fahafaham-po ao ambanin'ny angon-drakitra tsy voarindrao rehetra — manomboka amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny fanadihadiana ka hatrany amin'ny log chat sy mailaka — ary avadiho ho lasa fomba fiasa azo zahana ny teny rehetra.
Hetsika tolo-kevitra - Makà tolo-kevitra momba ny asa mifototra amin'ny fianarana lalina sy ny fahitana azy ho soso-kevitra azo ampiharina izay mitondra ny fiatraikany lehibe indrindra.
Fanapahana isa amin'ny risika - Fantaro ireo mpanjifa atahorana ary fantaro ireo mpamily ao ambadiky ny fihetsik'izy ireo amin'ny maodely mialoha mialoha amin'ny tambajotra.
Mangataka Demo Medallia
Tags: fanehoan-kevitry ny mpanjifamamantatra famantaranafitantanana traikefamedalyAlchemy MedalliaMedaly athenaRahona miaina medalliaFanamarihana an-tseraseraSMSfihainoana ara-tsosialyfandefasana hafatra an-tsoratrafahitana horonantsaryhevitra an-tsaryxm
Maninona ny orinasanao no tokony hampiasa horonantsary amin'ny marketing